I-china Soft PVC Coasters ifektri abakhiqizi | SJJ
Sebenzisa ama-Soft PVC Coasters ukuvikela itafula lakho netafula kanye nenkomishi. Lokhu kwenza impilo yakho ibe ngokunethezeka futhi ibe mnandi. Ama-coasters ajwayele ukusetshenziselwa imigoqo, amadili, imindeni kanye namaphathi. Sihlala senza ama-Coasters nge-Soft PVC, abicah, i-Metal, izinkuni noma izinketho zephepha. Ama-Coasters weSoft PVC ayi ...
Sebenzisa ama-Soft PVC Coasters ukuvikela itafula lakho netafula kanye nenkomishi. Lokhu kwenza impilo yakho ibe ngokunethezeka futhi ibe mnandi. Ama-coasters ajwayele ukusetshenziselwa imigoqo, amadili, imindeni kanye namaphathi. Sihlala senza ama-Coasters nge-Soft PVC, abicah, i-Metal, izinkuni noma izinketho zephepha. AmaSoft PVC Coasters yiwona athandwa kakhulu ngenxa yesici sokulwa namanzi. Ukubamba inkomishi, ingilazi, noma imagi enoketshezi, ama-Soft PVC Coasters angagwema ukuba manzi futhi aphule ngesikhathi esifushane. Ngezinto eziguquguqukayo zeSoft PVC, iSoft PVC Coasters ngeke yephule uma kwenzeka ama-coasters ehla etafuleni noma edeskini. Ama-Coasters weSoft PVC kulula ukubeka ama-logo akho anemibala ezinhlangothini zangaphambili noma zangemuva, ngenqubo yezobuchwepheshe ebhaliwe, edonswe ngemibala, ephrintiwe noma eqoshiwe. Ama-Coasters athambile e-PVC angaba ngumklamo owodwa, izingcezu ezi-2, izingcezu ezi-3 noma ubuningi besethi ngayinye yokupakisha.
Ama-Coasters athambile e-PVC ashibhile ngekhwalithi ephezulu, imibala enemibala, nemiklamo egqamile, kuhle kakhulu ukukhushulwa noma izikhumbuzo okufanele uzigcine isikhathi eside. Izinhlobo ezijwayelekile zamaSoft PVC Coasters ziyindilinga noma isikwele, usayizi cishe ngo-80 ~ 100 mm, kepha ubujamo nosayizi owucelayo kuhlale kutholakala ngemali encane yokusetha. Ama-Coasters ethu eSoft PVC enziwe ngezinto ezinobungane nezemvelo zeSoft PVC, anganikezwa ngesikhathi esifushane ngamanani afanele nekhwalithi futhi.
Izinto: I-PVC ethambile
Ama-Motifs: I-Die Struck, i-2D noma i-3D, izinhlangothi ezingashadile noma ezimbili
Imibala: Umbala ongemuva ungafanisa umbala we-PMS
Ukuqedela: Zonke izinhlobo zezimo, ama-Logos angaphrintwa, abhalwe nge-embossed, i-Laser iqoshwe njalonjalo
Izinketho Zokunamathisela Okuvamile: Akukho okunamathiselwe noma okwenziwe ngokwezifiso
Ukupakisha: 1pc / isikhwama se-poly, noma ngokuya ngesicelo sekhasimende
MOQ: ama-100 ama-PC
Langaphambilini Amafasitela we-Cable Soft PVC
Olandelayo: Amathegi wempahla ye-PVC ethambile
Ama-Fobs Esikhiye Esikhumba anezifanekiselo zensimbi
Izikhonkwane Zokuhambisa Esishelelayo
Wanyathela Ngaphandle Color Keychains
Izinhlamvu zemali ze-Mirror Effect noma i-Mint Proof Coins
Tin Plate Imali Amabhokisi